Islam – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa uga digay bulshada sixroolayaasha, soona jeediyey in awooda lagu isticmaalayo qolyaha argagaxisada loo adeegsado sixroolayaasha, iyagaa argagxiso dhab ahe, qofka marka loo sheego ee looga digo haduu isticmaalo diinta wuu kaga baxayaa.
Khudbad Jimcaha maanta Sh Maxamed ayaa sheegay in hore looga soo hadlay Ilaalinta Nafta & Sharafta, maantana Ilaalinta Caqliga, hadday tahay caqliga qofka iyo caqliga ummada Islaamka. Saddex arrimood ayeynu midba waxyar ka taaban doonaa, “Ta koowad, darajada Caqliga ku leeyahay Islaamka dhexdiisa, miisaanka Islaamku u yeelay iyo siduu u qiimeeyey. Arrinka labaad, waxyaabaha Caqliga khatarta geliya ee Islaamku inna faray inaynu ka ilaalino. Arrinka saddexaad, waxyaalaha lagu ilaaliyo Caqliga Muslimka xalkeeda.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in Islaamku Caqliga ku daray shanta waxyaalood ee Diimaha oo dhan u yimaadeen inay dadka u ilaaliyaan, waxaanu yidhi, “Arrinka labaad ee Islaamku waxuu ku qiimeeyey Caqliga, Ilaahay SW aad ayuu uga digay, Rasuulkuna CS aad ayuu ugu sharxay axaadiista. Arrimaha Ilaahay SW diiday waxa ugu horeeya khamriga, waxaanu idhi ka durka, si aad u liibaantaan. Hadii dadku bilaa caqli isu baxaan liibaan aduun iyo mid aakhiro ma jirayso.
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey waxyaalaha Caqliga fasahaadiya ayaa sheegay Caqliga markuu Islaamku inoo ilaalinayey waxuu inna faray inaynu ka ilaalino waxii waalaya, “sida mukhadaraadka, ama maandooriyaha mid qoyan iyo mid qalalan intaba, mid la cabayo, ama la urusanayo ama noocu doonayo ha ahaadee. Nebigu NNKH xadiis saxiix ah waxuu ku sheegay “Wax kastoo Caqliga dooriya waa khamri, wax kastoo caqliga dooriya waa xaraam” waxa soo gelaya wax kastoo Caqliga dooriya, tubaako, qaad, khamri, daroogada noocyadeeda kala duwan dhamaan qaacidada ayaa la siinayaa. Marka baadhitaan cilmi ah lagu sameeyo, waaqicigana lagu eego, maanka dadka wax ma u dhimaa, haba yaraatee dadka qaarkood, hadii laga helo shaygaasi waxuu noqonayaa jariimad iyo dembi, taasoo Islaamku ka duulayo sidii Caqliga loo ilaalin lahaa.
Author Mohamed IbrahimPosted on January 18, 2020 January 18, 2020 Categories IslamLeave a comment on Sheekh Dirir: “Ummadaha marka la qabsanayo dalalkooda iyo duunyadood Caqliga lagaga soo duulaa oo Maandooriye lagu sii daayaa..”
Author Mohamed IbrahimPosted on January 10, 2020 January 10, 2020 Categories IslamLeave a comment on “Xanta, Ceebaynta iyo Cayda, sidii Gacan-ku-dhiiglaha aynu u nacnay, waa inaynu Carab-ku-dhiiglahana u nacno..” Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir.
Author Mohamed IbrahimPosted on December 30, 2019 December 30, 2019 Categories Islam, Local, NewsLeave a comment on Shirkii Culimadda Soomaaliyeed oo La Soo Gabo-gabeeyey Kambaala
Author Mohamed IbrahimPosted on December 27, 2019 December 27, 2019 Categories IslamLeave a comment on Sheekh DIRIR: Diinta Islaamku way Mamnuucday u Dabaaldega Sannadka cusub ee Gaalada
Hargeysa – (warsoor) – Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa ugu baaqay bulshada in kelmada Alle ka cabsigu tahay kelmad Ilaahay SW uu faray Gaal iyo Islaam-ba sida aayad quraanka kariimka Ilaahay SW inoogu sheegay ‘Dadyahow Ilaahay SW ka cabsada.
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey khudbadii Jimcaha maanta oo ku saabsanayd muhiimada Alle ka cabsiga ayaa sheegay in loo baahan yahay ogaanshiyaha macnaha Alle ka cabsiga, mudnaanta uu ku leeyahay sharciga iyo midhaha laga goosanayo, waxaanu yidhi, “Tilmaanta ay taqwadu, ama Alle ka cabsigu leedahay, asxaabtu way isku dayeen Ilaahay SW haka raali noqdee, inay inoo fasiraan, Cali binu Abi daalib RC, isagoo inoo fasiraya macnaha Taqwada ayaa yidhi ‘Taqwadu waa Ilaahay SW oo qalbigaaga ku weyn, kuna camal-falaya waxyiga uu soo dejiyey, una diyaargarooba maalinta Qiyaamaha. Saddexdaa arrin haduu qofku sameeyo Alle ka cabsigii waa laga helay.
Cabdillahi ibnu Mascuud RC, asxaabigii weynaa oo sharxaya Alle ka cabsiga ayaa yidhi ‘Waa in Ilaahay SW la aqbalo la adeeco oon la caasiyin., in la xusuusnaado oo qalbigaaga aanay ka bixin iyo nimcadiisa faraha bdan oon laga gaaloobin.
Xasan al Basri, oo ah raggii asxaabta cilmiga ka hirqaday ee xikmadaha badnaa oo fasiraad ka bixinaya Alle ka cabsiga ayaa yidhi, ‘Dadka Ilaahay SW ka cabsada waa kuwa ka feejignaada waxii Ilaahay SW ka xaaraantimeeyey, ee si wanaagsan ula yimaada waxuu ku waajibiyey.
Cumar binu Cabdicasiis RC waxuu yidhi Taqwadu maaha habeenkii in la cibaadaysto, maalintiina la soomo, inta ka dhexeysana xaaraanta aad walaaqato, maaha qofku inuu marna dhinacan ahaado marna ka dhaco, ee waa inuu ku toosnaado waddada alle.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in marka la soo uruuriyo macnaha Taqwada ay noqonayso in layska riixo cadaab Ilaahay SW, laguna riixo daacada iyo cibaadada, kana riixo naftiisa, isagoo doonaya raali-ahaanshaha Ilaahay SW.
Mar uu ka hadlayey ahmiyada Alle ka cabsiga iyo martabada ay shareecada Islaamku ku sifaysay Sheekh Maxamed ayaa yidhi kalmada Taqwadu waa kalmada Ikhlaaska, “Kalmada Taqwada waxa lagala mid dhigay kalmada Ikhlaaska oo macnaheedu yahay cabsida. Qofka kelmadan ku dhawaaqa marka ay ka dhab tahay waxay keensanaysaa inuu Ilaahay SW ka cabsaday.
Nebi maxamed NNKH iyo asxaabtiisi waxay ku adkaysteen, Ilaahay SW u sahlay kelmada Alle ka cabsiga, oo ku hdawaaqeen, kuna noolaayeen.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in kelmada Alle ka cabsigu tahay kelmad Ilaahay SW uu faray Gaal iyo Islaam-ba sida aayad quraanka kariimka Ilaahay SW inoogu sheegay ‘Dadyahow Ilaahay SW ka cabsada.
Kelmada Alle ka cabsiga miisaankeeda iyo inaan la dhaafi Karin waxa inoo iftiiminaya Nebi walba CS ama Rasuul walba CS markuu ummadiisa u yimaado waa halkuu casharka uga bilaabayey, sida Ilaahay SW aayad quraanka inoogu sheegay ‘idinka iyo ummadahii idiinka horeeyey ee kutubta la siiyey Alle ka cabsiga ayaa la farayey, wax cidna laga dhaafay ma ahayn’.
Miisaanka Alle ka cabsigu shareecada Islaamka dhexdeeda ku leeyahay waxa caddaynaya waa xikmada aynu u cibaadaysanayno, oo qofku markuu caabdudka noqdo waxuu gaadhayaa derejada laan-dheere-nimada ee Taqiga, sida Ilaahay SW aayad quraanka inoogu sheegay, ‘Dadyahow Rabigiina caabuda, dadkii horena isagaa u Rabbi ahaa, si aad u cabsataan’ cibaadadaa ayaad cabsida ku helaysaan.
Cabdisa xarunteedu halka ay degto waa xubnaha jidhka halka u wanaagsan oo Qalbiga ah. Qofku weligii ha dedaalo, balse hadaan daacadnimadii qalbigu jirin iyo dareenkii cabsidii ku weynaa ee Ilaahay SW, waxba kama jiraan waxiisa. Nebigu NNKH markuu xadiiskii dheeraa dadka ku waaninayey waxuu lahaa ‘Alle ka cabsigu waa halkan (qalbiga ayuu gacantiisa ku tilmaamayey).
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey midhaha laga goosanayo marka qofku Alle ka cabsiga la yimaado ayey ugu horeysaa jacaylka Ilaahay SW, waxaanu yidhi
“Aad waxaynu ugu ordeynaa ee Ilaahay SW u jecelnahay, ee diintiisa u jecelnahay, ee Rasuulkiisa NNKH u jecelnahay waa in Ilaahay SW inna jeclaado. Jacaylku waa wax weyn, madaxdu waxay u ordeysaa shacabku ha idin jeclaado, shacabku waxay u ordayaan madaxdu ha idin jeclaato, Gabadhu waxay u ordeysaa Odeygaagu ha ku jeclaado, jacayladaa oo dhan ka ka muhiimsan ee aynu u ordeyno waa in Ilaahay SW inna jeclaado, markuu Ilaahay ku jeclaadana qof kaloo kuu cadhooda waxba kuma yeelayo.
Naxariista Ilaahay SW aynu baadigoobayno waxa lagu helaa Alle ka cabsiga sida Ilaahay SW quraanka kariimka ugu cadeeyey, taasoo laba boqol iyo dheeraad aayadood ku soo arooreen ‘Naxariistaydu shay walba way ka balaadhatay, waxaanan aakhiro ku gooni yeeli doonaa kuwa iga cabsada’.
Marka aynu doonayno cid aynu is-hayno inaan iska cellino, cabsida Ilaahay SW waa inay jirtaa, laakiin xayd-xaydasho kale waxba inooma tarayso, Ilaahay SW waxuu yidhi ‘Gaal oo dhan wuu isu-kiin raacay, Muslimow idinkuna ha u kala hadhina, laakiin ogaada cidaan wehelinayo ee barbar taaganahay waa kuwa iga cabsada’.
Murugada iyo werwerka dadka ku badan waxa lagaga badbaadayaa cabsida Ilaahay SW.
Ajar iyo abaal weyn ayuu Ilaahay SW u ballanqaaday kuwa ka cabsada
Sheekh Maxamed ayaa bulshada ku baraarujiyey in Xaaraanta ummadu u badheedho loo baahan yahay in Alle ka cabsigu ka joojiyo, waajibka la fudedsaday waa in Alle ka cabsigu kugu baraarujiyo, dulmiga iyo xad-gudubka waa in Alle ka cabsigu innaga joojiyaa, Alle ka cabsiga waa inaynu nafaheena, caruurteena iyo bulshadeena ku tarbiyadeyno. Ilaahay SW ayeynu weydiisanayna ain qalbigeena ku weyneeyo Alle ka cabsiga, Amen.
Author Mohamed IbrahimPosted on December 20, 2019 December 20, 2019 Categories IslamLeave a comment on “Alle ka cabsiga waa inaynu nafaheena, caruurteena iyo bulshadeena ku tarbiyadeyno..” Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir.
Hargeysa – (WARSOOR) – Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida, ayaa la wadaagay bulshada sida ay xaaran u tahay in lagu xad-gudbo, sifo gaar ah oo xatooyo ahna loogu qaato xoolaha danta guud ah ee ka wada dhexeeya ummadda.
Author Mohamed IbrahimPosted on November 2, 2019 November 2, 2019 Categories IslamLeave a comment on Sheekh Dirir oo Khudbad Kaga Hadlay Qaababka Kala Duwan ee loo Sameeyo Musuqmaasuqa
Saudi Arabia – (warsoor) – Millions of haj pilgrims began heading back to Mecca for final prayers on Tuesday as the world’s largest annual gathering of Muslims wound down without incident despite the logistical challenges and escalating regional tensions.
Author Mohamed IbrahimPosted on August 14, 2019 August 15, 2019 Categories Islam, News, WorldLeave a comment on Muslim pilgrims pray in Mecca as haj winds down without incident
Author Mohamed IbrahimPosted on May 31, 2019 May 31, 2019 Categories IslamLeave a comment on Sideen U Bixiyaa Sakaatul Fidriga?
Author Mohamed IbrahimPosted on May 26, 2019 May 26, 2019 Categories IslamLeave a comment on Ramadaanta iyo Cimriga
Author Mohamed IbrahimPosted on May 24, 2019 May 24, 2019 Categories IslamLeave a comment on SH Dirir: “Nebigu NNKH wuu u duceeyey dadka (ganacsatada) ummadooda u naxariista..”
WARSOOR Proudly powered by WordPress